न्यायाधीशमा संक्रमण देखिएपछि सर्वोच्चमा एकल इजलासमात्र
मुख्य पृष्ठवाग्मतीन्यायाधीशमा संक्रमण देखिएपछि सर्वोच्चमा एकल इजलासमात्र
काठमाडौ, १८ असोज । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारणले एकल इजलास मात्र सञ्चालन गरेको छ । केही न्यायाधीशमा संक्रमण देखिएपछि सर्वोच्चले एकल इजलास मात्र सञ्चालन गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सर्वोच्चमा संक्रमणका कारणले केही न्यायाधीश अहिले होम आइसोसनमा रहेका छन् । सर्वोच्चमा एकल, संयुक्त र बृहत् इजलास सञ्चालन हुँदै आएका थिए । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र अर्का न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा मात्र आएका छन् । न्यायाधीश डा. शर्माको एकल इजलासमात्र सञ्चालनमा छ ।
सहप्रवक्ता दाहालले एकल इजलासबाट रिट निवेदन, प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेखालका र नगरी नहुने निवेदनको मात्र सुनवाइ हुने जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको सूचनामा अदालतका न्यायाधीश, केही अधिकृत र कर्मचारी संक्रमित भएको र संक्रमित सबै होम क्वारेन्टिन, आइसोलेसनमा रहेको जनाइएको छ ।